सुरु भयो नयाँ बर्ष २०७५ को उमङ्ग, सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेडले सार्वजनिक गर्यो नयाँ क्यालेन्डर !
ARCHIVE, CORPORATE, COVER STORY » सुरु भयो नयाँ बर्ष २०७५ को उमङ्ग, सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेडले सार्वजनिक गर्यो नयाँ क्यालेन्डर !
काठमाडौँ - सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेडको २०७५ सालको क्यालेन्डर चैत्र २३ गते बैंकका अध्यक्ष राजेश कुमार श्रेष्ठका साथमा बैंकका कामु. प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जीवन भट्टराईले संयुक्त रुपमा बिमोजन गरेका छन् । उक्त क्यालेन्डरमा नेपाल सरकारबाट स्विकृत बिदाहरु तथा चाडपर्वहरु समेत उल्लेख गरिएको बैंकद्वारा जारी जारी प्रेस बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
बैंकले जारी गरेको बिज्ञप्तिमा अगाडी भनिएको छ, 'बैकले काठमाडौं उपत्यकामा ११ शाखाहरु र ५ वटा एक्स्टेन्सन काउण्टर र उपत्यका बाहिर ८२ शाखाहरु र ३ वटा एक्स्टेन्सन काउण्टर साथै १० वटा शाखारहित बैकिंङ्ग गरी जम्मा १११ स्थानबाट कारोबार सञ्चालन गरिरहेको छ ।' अन्य जानकारीका लागि बैकको वेबसाइट तथा बैकका शाखा कार्यालयहरुमा सम्पर्क राख्न अनुरोध गरिन्छ ।